traintips Archives | စာမျက်နှာ3၏5| တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ရထားအကြံပေးချက်များ
နေအိမ် > ရထားအကြံပေးချက်များ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ဂျူး Mardi Gras မည်သူမဆို? ပွဲတော်ကြီးစီရင် Enter! အာဒါ 14 နှင့် 15 ရက်စီရင်ကျင်းပ, မတ်လနှင့်တိုက်ဆိုင်သောဂျူးပြက္ခဒိန်၏ဒွါဒသမလ. စီရင်လေထုကဲ့သို့သောပွဲတော်ရှိပါတယ်, လူတို့သည်အကောင်းဆုံးသောဥပုသ်နေ့အဝတ်အစားသို့မဟုတ်ဖန်စီဝတ်စုံများကိုဝတ်ဆင်ကြသည်…
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ဥရောပခရီးသွား
nice ပွဲတော်ကြီးပြီးတော့နည်းလမ်းများရှိပါသည် Get ရန်
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ အမှုအရာနေဆဲဤအချိန်လောက်အနည်းငယ်ရှိအေးမြသောဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ဒါပေမယ့် Nice ပွဲတော်ကြီးသင်တက်နွေးဖို့သေချာဖြစ်ပါသည်! The French Riviera createsaunique event where almostamillion visitors from all over the world flock to Nice. Nice Carnival is one of the most…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပဲရစ်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ရထားခရီးသွားအများအပြားအခွင့်အရေးနှင့်တကွကြွလာ. ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဒါကြောင့်သွားလာရန်အရှိဆုံးအဆင်ပြေလမ်းဖွင့်. အဆိုပါထိုင်ခုံကျယ်ဝန်းရှိပါတယ်, သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပေါ်တွင်အလိုတခုတည်းထက်သင်ပိုမို legroom ခွင့်ပြု. ရထားဖြင့်သွားခြင်းသည်အန္တရာယ်အကင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်…
ရထားဖြင့်ပါရီမြို့မှအမ်စတာဒမ်သို့သွားပါ3နာရီ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်ရောက်ရှိရန်တလမ်းတည်းဖြင့်ထက်ပိုရှိရဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒါဟာင်. ထိုသူတို့ကသူတို့ပြုသမျှလိုလားသူများနှင့် cons အတူပါလာစဉ်က, သင်နှိုင်းယှဉ်စေသည့်အခါရထားအမ်စတာဒမ်မှပဲရစ်မြို့ကနေခရီးသွားလာမှုကိုအကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်နေဆဲ. အကြောင်းပြချက်အားလုံးကိုသင့်အားပေးသည်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ သငျသညျဥရောပခရီးစဉ်စီစဉ်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်စရာတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါတယ်! အဆုံးမဲ့သောနေရာများနှင့်အတွေ့အကြုံများ, သငျသညျအနှစ်ပေါင်းများစွာခရီးသွားလာခြင်းနှင့်သင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလွဲချော်ပါတယ်တူသောနေဆဲခံစားရနိုင်ကြောင်း. ၎င်းသည်ခရီးသွားအမှားများကျူးလွန်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေသည်, and missing out on…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပခရီးအိပ်မက်ဤမျှလောက်များစွာသောများအတွက်စစ်မှန်သောရောက်လာပြီ. ထိုအသင်သည်သင်၏ပုံးစာရင်းပယ်ဤဦးတည်ရာကို tick ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်နှင့်ဥရောပတိုက်တွင်အားလုံးကိုအကောင်းဆုံးသောအရပ်တို့ကိုကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းနေပါလျှင်, you’ll want to make the experience as memorable as…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား...
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ တစ်ဘူတာသို့ဆွဲရထား၏ whooshing သံကို, နှင့်ပေါ်ရတဲ့နှင့်တစ်နေရာရာကိုသွား၏ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့. သငျသညျနာမည်ကြီးများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာရထားလမ်းကြောင်းများထက် သာ. ကောင်း၏ဘာမှစဉ်းစားနိုင်သလား? ရထားခရီးသွား၏ရွှေခေတ်တစ်သတိပေးချက်ဖြစ်ကြောင်း. When people…
ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ရထားမသက်ဆိုင်ရာသီအီတလီမှာခရီးသွားလာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း. သို့သျောလညျး, သူတို့ကဘေးကင်းနှင့်ပိုပြီးအဆင်ပြေ option ကိုဖြစ်သက်သေပြ, အထူးသဖြင့်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွင်းမှာ. အီတလီမှာဆောင်းရာသီမီးရထားခရီးသွားလာသာဘေးကင်းလုံခြုံမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အထိရောက်မယ့်. ဤဆောင်းပါးသည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သင်တစ်ဦးတစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားဖြစ်ကြပြီးသင်တစ်ဦးခြေသလုံးအဖြစ်ခရီးသွားလေ့ကျင့်လိုပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာအရပ်၌ရှိနေ. ရထားခရီးသှားသငျသညျဥရောပကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသမျှတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်ဥရောပကတဆင့်သွားလာဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ဖြစ်…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား
ထိပ်တန်း5ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့အကောင်းဆုံးမြို့ကြီးများ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ 2018 တစ်ခုအဆုံးမှာနီးပါးဖြစ်ပါသည်, သာခရစ်စမတ်နီးသည်ကိုဆိုလိုနိုငျသော! ပြည်သူ့နေဆဲထိုသို့အဆင်သင့်ရတဲ့ကြသည်မဟုတ်, ဒါပေမယ့်ခရီးသွားများအတွက်, ခရီးစဉ်စီစဉ်မှမြင့်မားသောအချိန်ကန့်. သင်၌ခရစ္စမတ်ဖြုန်းဖို့လက်ျာဘက်မြို့ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်, we’ve…
ရထားခရီးသွားခြင်း, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထားခရီးသွားဆွီဒင်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ...
5 ဥရောပရှိ Charm Old City Centre အများစု